Xisaabta Kaydka Ganacsi ee ugu Sareysa ee 10 ee ugu sareysa 2021 - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Xisaabta Kaydka Ganacsi ee ugu Sareeya ee 10 ee ugu Sareeya 2021
Miyaad raadineysaa inaad furato koonto kayd kayd shirkadeed oo aad u sarreeya si aad u ilaaliso lacagtaada oo aad u hesho dulsaar?
Xisaabaadka kaydka ee wax -soo -saarka sare waxay kaga duwan yihiin xisaabaadka keydka dhaqameed ee ah inay kugu abaal -mariyaan dulsaar sare oo ay ka dhigaan in lacagtaadu si dhakhso leh u koraan marka ay ku jirto koontadaada.
Heerka dulsaarka ee ay bixiyaan xisaabaadyadan waxaa lagu muujiyaa sida APY ama soo celinta boqolleyda sanadlaha ah. Markay APY -gaagu korodho koontada kaydka ee la siiyay, sida ugu dhakhsaha badan ayaa lacagtaadu u kori doontaa.
Waa maxay koontada kaydka ganacsiga ee dhalidda badani?
Waa Maxay Astaamaha Xisaabaadka Kaydka Wax -Soo -saarka Ugu Fiican?
Sidee bay u shaqeeyaan xisaabaadka kaydka ee wax-soo-saarka badan
Xisaabaadka Kaydka Ganacsi ee Ugu Saamaynta Badan
Koontada Kaydka Faa'iidada Faa'iidada ee Capital One Business
Bangiga Chase: Helitaanka Weyn ee Macaamiisha Chase
Wells Fargo: Intro -ga ugu sarreeya APY oo ka socda Bangiga Dhaqanka
nbkc Xisaabta Suuqa Lacagta Ganacsiga
Koontada Kaydka Ganacsiga ee Bangiga Axos
Bankiga Bulshada ee Pleasant Hill Business Premier Account Xisaabaadka Lacagta
Koontada Ganacsiga Kaydka Banka Goldwater Plus
Koontada Kaydka Suuqa Lacagta ee Bangiga Internetka ee Kowaad
Koontada Kaydka Ganacsiga ee Live Oak Bank
Xisaabta Kaydka Wax -soo -saarka Sare ee Ally
Marcus waxaa qoray Goldman Sachs Koontada Kaydka Tooska ah ee Wax -soosaarka Sare
Xisaabta Kaydka ugu Fiican ee Ganacsiyada Yaryar: Gunaanad
Go'aaminta taas koontada keydinta ugu fiican baahiyahaaga maahan hawl fudud. Waxaa jira adduunyo suurogal ah halkaas. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ogtahay sifooyinka aad raadineyso, waxaad ka heli kartaa koontada keydinta ganacsiga ugu fiican oo leh isku -darka saxda ah ee adeegyada iyo soo -celinta wax -soo -saarka sare.
Milkiilayaasha meheradaha yar yar, koontada keydintu waxay ka badan tahay maalgelin roob-maalmeed. Kani waa fursad mar uun ah oo aad ku kobcin karto raasumaalkaaga boqolaal ama kumanaan doollar sannad kasta-gaar ahaan haddii aad doorato koonto kayd shirkadeed oo wax soo saar leh.
Xisaabaadka Keydinta Wax -soo -saarka Sare waxay guud ahaan bixiyaan dulsaar ka sarreeya koontada kaydka celceliska oo leh dulsaar ah 0.06% (laga bilaabo Luulyo 2021). Qiimayaashan celcelis ahaan xitaa lama socdaan sicir -bararka sannadlaha ah, oo caadi ahaan ah 2%.
Sida milkiile kasta oo ganacsi yar kuu sheegi doono, koontadaada bangiga ganacsiga waa qayb muhiim u ah hawlahaaga maaliyadeed. Ka dib oo dhan, koontadaada ganacsi waa meesha aad lacagtaada ku haysato si aad u daboosho kharashyada, mushaharka, iyo kharashyada hawlgalka.
Marka ganacsigaagu kobco oo sii fido, waxaa laga yaabaa inaad koonto jeeggaaga ku haysato lacag caddaan ah oo ku filan si aad u daboosho kharashyada billaha ah iyo kharashaadka kale ee la filayo, runtiina, xitaa waxaad haysataa raasamaal dheeraad ah oo aad dhinac iska dhigto.
Si ka duwan xisaabaadka ganacsiga, xisaabaadka keydinta ganacsiga waxaa loola jeedaa in loo isticmaalo kaydinta raasumaalka xad-dhaafka ah-waxaana rajeyneynaa koonto keydin ganacsi oo wax-soo-saar badan leh, kordhiso lacagtaada inta aad kaydineyso.
Koontada kaydka ee wax -soo -saarka sare waa nooc ka mid ah koontada deebaajiga ee kasbata dulsaarka waxaana caadiyan caymis ilaa $ 250,000 oo dalka oo dhan ka hesha Hay'adda Caymiska Kaydka ee Federaalka (FDIC). Taasi waxay tidhi, xitaa haddii bangigaaga ama ururkaaga amaahdu hoos u dhaco, dawladdu waxay dammaanad qaadeysaa in lacagtaada la ilaaliyo oo la heli karo.
Xisaabaadka ugu wax-soo-saarka fiican waxay yeelan karaan celcelis boqolkiiba boqol ah 1-2% (APY). Iyada oo leh APY oo ah 1.5%, dheelitirka $ 10,000 wuxuu sameyn doonaa qiyaastii $ 150 sanadkii.
Taasi waxay u ekaan kartaa mid aan faa'iido gaar ah lahayn, laakiin soo -celintaadu aad bay uga sarreysaa koonto leh APY oo ah 0.06% oo ku siin doonta $ 6 sanad kadib. Sidaad arki karto, kala duwanaanshaha dhibcaha boqolleyda ayaa saamayn weyn ku leh dakhligaaga.
Qiimaha dulsaarka sare
Heerarka koontada kaydka ayaa kor u kaca oo hoos u dhaca heerka dawladda federaalka, laakiin marka la eego xaaladaha dhaqaale ee caadiga ah, xisaabaadka wax-soo-saarka badani waxay bixiyaan APYs 1-2% iyo ka sareeya.
Guud ahaan, hay'ad maaliyadeed oo onlayn ah oo keliya ayaa dammaanad-qaadeysa APY-da ugu sarreysa maxaa yeelay ma laha dul-saar la mid ah bangiyada dhaqanka. Haddii aad taqaanid taageerada internetka iyo taleefoonka oo aadan u baahnayn shabakad ATM oo ballaaran, waxaa jira hab sahlan oo lagu heli karo dulsaarka ugu fiican.
Shuruudaha furitaanka ee dhabta ah
Iyadoo ku xiran badeecada keydinta, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad dhigato deebaaji ugu yar. Xisaabaadka keydinta ganacsiga ugu fiican waxay leeyihiin deebaaji ugu yar oo ah $ 1 ama ka tanaasula deebaajiga ugu yar, halka kuwa kalena ay u baahan yihiin $ 10,000 ama $ 25,000 si ay akoonka u furaan.
Mustaqbalka, waxaa laga yaabaa inaad buuxiso shuruudaha dheelitirka ugu yar, laakiin hay'ado maaliyadeed oo badan ayaan ku weydiin. Soo ogow haddii aad si otomaatig ah uga wareejin karto koontadaada ganacsi, ha ahaadeen kuwo isku bangi ah iyo haddii kale, si aad u buuxiso dhammaan shuruudaha.
Maya ama ajuuro yar
Iyadoo aan loo eegin hay'ad maaliyadeed oo aad dooratid, xisaabaadka keydintu waxay leeyihiin xadka bixitaanka oo ah lix wareeg wareeg kasta. Intaas ka dib, waxaad bixin kartaa ujrada bixitaanka. Haddii kale, bixiyeyaasha koontada ayaa lacag ka qaada sida ay u arkaan taam.
Xisaabaadka ugu sarreeya, badidoodu midkoodna ma lahayn khidmad bille ah oo soo noqnoqota, khidmadaha xisaabta, ama khidmadaha macaamilka, ama way dhaafaan markay haystaan ​​dheelitir cayiman. Haddii bixiyaha koontadaadu leeyahay khidmado - “khidmadaha adeegga billaha ah” ama “khidmadaha dayactirka bishii” waa wax caadi ah - waa inay si hufan uga hadlaan kharashyada iyo sida looga fogaado.
Adeegyada bangiyada ganacsiga ee onlaynka ah
Markay timaado xisaabaadka keydinta, MMA -yada, iyo CMA -yada, bangiga internetka ma aha mid ka reeban, waa wax iska caadi ah. Xisaabaadka wax -soo -saarka ee ugu wanaagsan ayaa kuu oggolaanaya inaad maamusho koontadaada, wareejiso lacagaha, ama aad lacag -bixinno ka samayso habeen iyo maalin xafiiska ama aaladda moobiilka.
Ka sokow lahaanshaha mareegaha desktop-ka-isticmaale-u-helka ah, raadi barnaamij bangi-gacmeed oo habboon. Koontadaada internetka waa inay sidoo kale lahaataa isku-dhafka dhaladka ee waqti-badbaadinaya.
Adigoo isku xiraya aaladahaaga ganacsi ee kale - sida softiweerka xisaabinta iyo softiweerka maareynta kharashyada - waxaad ka fogaataa khaladaadka gelitaanka xogta gacanta.
Kaydso koontada saxda ah
Adiga oo furaya koonto kayd ganacsi oo wax-soo-saarkiisu sarreeyo, waxaad ku shubi kartaa lacagtaada dadaal dheeri ah. Si aad u hesho dakhliga ugu fiican, raadi badeecadaha kaydinta oo leh APYs joogto ah oo aad u sarreeya iyo laga yaabee khidmadaha adeegga.
Xulashooyinka muddada-dheer sida CD-yada ayaa leh awood dakhli oo aad u weyn, laakiin waxay ku yimaadaan qiimaha dareeraha.
Haddii aad doorato koonto dabacsan oo loo adeegsado maalin kasta, dooro mid leh adeegyo bangiyeed oo sugan oo sugan, barnaamij deg deg ah, iyo isku-darka ku habboon oo aan lahayn khidmad bille ah.
Ugu dambayntii, waa inaad diyaar u ahaataa inaad ka gudubto bangiyada waaweyn ee waaweyn iyo ururada deynta si aad u hesho dulsaar tartan. Hay'adaha maaliyadeed ee onlaynka kaliya ayaa bixiya qaar ka mid ah APY-yada ugu fiican suuqa.
Iyada oo leh dano isku dhafan, kaydkaagu si dhakhso leh ayuu ugu kori karaa koontada kaydka ee dhalidda badan.
Marka la barbardhigo dulsaarka fudud, dulsaarka isku dhafan micnaheedu waa inaad dulsaar ka hesho maamulahaaga iyo dulsaarka uu kasbado labadaba. Marka laga hadlayo dulsaarka fudud, waxaa kaliya lagu xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo maamulahaaga ama dheelitirka kaydkaaga oo laga jaray dulsaarka.
Intee jeer ayaa dantaadu isku biirtaa waxay ku xiran tahay koontada kaydka. Qaar baa maalin walba wada fadhiya, qaarna bil walba. Mar kasta oo dantaadu badato, ayay soo noqoshadaadu sareysaa.
Iyada oo leh koonto kayd sare oo wax -soo -saar leh, waxaad kala bixi kartaa ama ku wareejin kartaa lacag (oo ay ku jiraan wareejinta elektaroonigga ah, jeegaga, iyo wareejinta siligga) koontadaada illaa lix jeer bishii adiga oo aan bixin khidmad ciqaab ah ama halis gelinaysa koontada oo la xiray.
Si kastaba ha ahaatee, sharcigan federaaliga ah, oo loo yaqaan Regulation D, ayaa si ku meelgaar ah looga qaaday dhammaan keydadkii intii lagu jiray dillaaca coronavirus maadaama dadku ay u baahan yihiin helitaan degdeg ah oo lacagtooda ah.
Waa kuwan Xisaabaadka Keydinta Ganacsi ee Wax -soosaarka Sare ee ugu Fiican ee aad heli karto si aad lacagtaada u geliso oo aad filayso soo laabasho yar
Xulashada ugu horreysa ee ku jirta liiskayaga xisaabaadka kaydka ee ugu wax-soo-saarka fiican waa koontada kaydka Faa'iidada Faa'iidada Capital One Business.
Tani waa ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay ganacsatada doonaya inay ka faa'iidaystaan ​​dulsaarka dulsaarka laakiin weli doonaya inay ku habboonaan karaan bangiyo la leh Capital One.
Si aad u furato koontadan, waxaad u baahan doontaa inaad tagto meel Capital One ah. Markaad tan sameyso, waxaad marin u heli doontaa bangiga internetka iyo sidoo kale ikhtiyaarka inaad ku xirto koontadaada imtixaanka Capital One Business.
Sidoo kale, koontadan kaydka ganacsiga ee Capital One waxay bixisaa APY gaar ah oo ah 2% 12 -ka bilood ee ugu horreeya ka dibna APY -gaagu wuxuu ku saleysan yahay dheelitirka koontadaada.
Astaamaha koontada kaydka Faa'iidada Ganacsiga ee Capital One Business
Lacagta ugu yar ee $ 250
APY xayaysiis ah oo ah 2% 12kii bilood ee ugu horreeyey; Ka dib marka 12 -ka bilood dhammaadaan, Capital One waxay ku dabaqi doontaa dheelitirka koontada kaydka ganacsiga caadiga ah
Lix lacag bixin oo bilaash ah bishiiba
Ma jiro wax lacag ah oo adeegga bil walba ah oo ah $ 3 haddii aad haysato $ 300 oo deyn ah
Bixinta ATM -ka lacag -la'aanta ah ee ATM -yada Capital One
$ 2 oo ah khidmadaha lagala baxo inta badan ATM -yada kale; Xulashada ATM -yada ayaa kaa qaadi doona lacag bixitaan ah $ 5
U dir xawaaladaha dibedda iyo kuwa caalamiga ah. Khidmadaha ayaa u dhexeeya $ 10 illaa $ 50
In kasta oo Bangiga Chase uusan bixin xisaabaad keydin ganacsi oo aad u sarreeya, haddana wuxuu bixiyaa faa'iidooyin waaweyn oo aan la taaban karin.
Kuwa haysta koontada cusub waxay dulsaarkooda ugu horreeya helayaan 0.15% oo keliya, taasoo kordhaysa 0.4% haddii aad dhigato wax ka badan $ 25,000. Tani uma muuqato mid aad u badan, laakiin weli aad ayay uga sarraysaa haddii aad lacagtaada uga tagtay koonto jeeg.
Kumanaan laamood oo qaran ah iyo ATM -yada dalka oo dhan, weligaa ma heli doontid lacag la'aan. Adeegga macmiilka ee 24/7 iyo awoodda aad ku booqan karto xafiiska xaafaddaada, waxaad mar walba heli kartaa caawimaad.
Ma jiraan wax khidmad ah oo bille ah markaad ku xirato koontadaada jeegga Bangiga koontadaada kaydka ganacsiga.
Bangiga Chase waa ikhtiyaar aad u fiican:
Macaamiisha Chase ee hadda
Milkiileyaasha doonaya helitaan joogto ah, taageero iyo amni
Shirkadaha leh dheelitir ka badan $ 25,000
Si la mid ah Chase iyo bangiyada kale ee dhaqanka sare, xisaabaadka kaydka shirkadaha ee wax-soo-saarka badan ma aha kaarka wicitaanka ee Wells Fargo.
Taa bedelkeeda, waxay ku dhiirrigeliyaan macaamiisha inay dhigaan wax ka badan $ 25,000 iyagoo siinaya APY sare oo ah 2.03% muddo 12 bilood ah. Intaa ka dib, waxay hoos ugu dhacaan 0.1%, iyadoo la waafajinayo dalabyada bangiyada waaweyn intooda badan.
Haddii aad u baahan tahay inaad dhigato wax ka yar $ 25,000, ka bilow heerkaan 0.1%.
Ma jirto lacag bille ah oo ah $ 15 haddii aad leedahay deyn ka badan $ 10,000. Si kastaba ha ahaatee, Wells Fargo waxay leedahay ajuuro kale oo yaraynaya kaydkaaga suurtogalka ah. Wareejinta siliggu waxay leedahay khidmad dhan $ 15 macaamil ganacsi kasta. $ 100 kasta oo aad dhigato in ka badan $ 5,000 bishii, waxaa lagaa qaadi doonaa $ 0.30.
Sida Chase, Adeegga Macmiilka ee Wells Fargo iyo xafiiskiisu waa xulasho macmiil badan. Helitaanka kaarka bangiga iyo kumanaan ATM, iyo sidoo kale kartida qorista jeegaga, ayaa ka dhigaysa koontadan mid soo jiidata milkiilayaasha meheradaha leh baahi lacageed oo degdeg ah.
Wells Fargo waa ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay:
Macaamiisha Wells Fargo ee hadda
Milkiilayaasha doonaya helitaanka, taageerada, iyo amniga
Shirkado waaweyn oo doonaya APY ka sarreeya bangiyada dhaqanka badankood
Ikhtiyaarka koontada keydinta oo aan kaliya bixinaynin APY weyn, laakiin sidoo kale kuu oggolaanaya inaad si dhakhso leh oo fudud u furto koonto onlayn ah oo aan lahayn deebaaji ugu yar, tixgeli koontada Suuqa Lacagta Ganacsiga ee nbkc.
Koontadan kaydka ahi waa doorasho cajiib ah oo u leh milkiilayaasha meheradaha ee aan haysan lacag dheeraad ah oo ku filan oo ay ku maalgashadaan koontadooda kaydka laakiin weli doonaya inay kaydiyaan mustaqbalka.
Intaa waxaa dheer, koontada suuqa lacagta nbkc waxaa lagu maamuli karaa gebi ahaanba onlayn - iyada oo loo marayo kombiyuutarkaaga ama aaladda gacanta.
Tilmaamaha koontada Suuqa Lacagta Ganacsiga ee nbkc
Looma baahna deebaaji ugu yar
APY oo ah 0.80% inta aad haysato dheelitirka ugu yar ee ah $ 0.01
Illaa lix oo ay ku jiraan ka bixitaannada billaha ah
Bangiga onlaynka ah iyo kan mobilada oo lacag la'aan ah oo leh eStatements
Lacag xisaabeed bille ah ma jirto
Nbkc lacag la’aan ah Debit MasterCard oo leh marin ATM
$ 0 khidmadaha macaamil ganacsi, macaamil aan xad lahayn
Hubi deebaajiga $ 0 iyo wareejinta gudaha ee soo socota
$ 5 ayaa laga qaadaa khadadka dibadda ka baxa, $ 45 waxaa laga qaadaa khadadka caalamiga ah (kuwa soo gala iyo kuwa baxaya)
Waxa ku xiga liistadayada waa koonto keydin ganacsi oo toos ah oo laga helo bangiga asalka ah ee Axos. Ka sokow ahaanshaha koonto onlayn ah, koontada Kaydka Ganacsiga ee Axos sidoo kale waa ikhtiyaar kayd oo wax-soo-saar leh oo ka sarreeya dulsaarka inta badan bangiyada caadiga ah iyo kuwa tooska ah.
Maadaama aad akoonkan ku dalban karto onlayn, waxay aad ugu habboon tahay milkiilayaasha meheradaha doonaya inay si dhakhso leh u helaan koontadooda kaydka.
Tilmaamaha koontada kaydka ganacsiga ee Axos Bank
Lacagta ugu yar ee $ 1,000
APY ee 0.8% dhammaan akoonnada ay ku jiraan deebaajiga hore ee loo baahan yahay $ 1,000
Lix lacag -wareejin oo bilaash ah bishiiba oo leh lacag dhan $ 10 xawilaad kasta oo ka badan xadkaan.
60 shay oo lacag la'aan ah (deymaha, deymaha, alaabta la keydiyey) bishii oo leh deebaaji fog
20 shay oo bilaash ah bishii, $ 0.30 shay kasta oo dhaafay xadkaan
Ma jiro khidmad adeeg bille ah haddii aad leedahay celcelis maalinle ah oo ah $ 2,500, haddii kale $ 5 khidmad adeeg
Bangiga bilaashka ah iyo moobiilka
Mararka qaarkood bangiyada maxalliga ah iyo kuwa gobolku waxay bixiyaan sicirka xisaabta kaydka oo aad uga fiican bangiyada qaranka. In kasta oo xulashooyinkan laga yaabo inaysan heli karin macmiil kasta, waxay ku dhammaystiraan APYs weyn iyo adeegga macmiilka.
Markay sidaas tahay, Bangiga Bulshada ee Pleasant Hill wuxuu bixiyaa koontadooda Maareynta Lacagta Premier Premier-koonto kayd oo shirkadeed oo wax-soo-saar leh oo leh kayd yar oo furitaan oo rafcaan u noqon kara meheradaha nooc kasta iyo qiyaas kasta leh.
Bangiga Bulshada ee Pleasant Hill Ganacsi Premier Astaamaha Xisaabaadka Lacagta
Lacagta ugu yar ee $ 25
APY ee 1.63%
Bayaannada bangiga elektaroonigga ah ee bilaashka ah
Khidmadda adeegga bishii ee $ 10 haddii dheelitirka koontadu hoos uga dhaco $ 10,000
Ka bixitaan lacag la'aan ah Arbacada labaad iyo afaraad ee bil kasta; Dhammaan ka bixitaannada kale waxaa laga qaadi doonaa lacag dhan $ 25
Xulashada xigta ee ku jirta liiskayaga xisaabaadka kaydka wax -soo -saarka ee ugu fiican waxay ka timaaddaa Goldwater Bank. Koontada Ganacsiga Kaydka Banka Goldwater Plus waxay leedahay APY adag, laakiin deebaajiga ugu yar ee ugu sarreeya liiskayaga. Taas micnaheedu waa inaad u baahan doonto ilo muhiim ah ikhtiyaarkan.
Si kastaba ha ahaatee, ku -dalbashada koontada Goldwater waa mid sahlan - waxaad ku samayn kartaa shaqsi ahaan ama onlayn - waxaadna isticmaali kartaa bangiyada Goldwater ee bangiyada onlaynka ah iyo kuwa guurguura.
Astaamaha Koontada Ganacsiga Kaydka Plus Bank Gold Bank
Lacagta ugu yar ee $ 25,000
Laba lacag bixin oo bilaash ah bishiiba
Warbixinnada bangiga elektaroonigga ah ee saddex -biloodlaha ah
Bangiga Internetka ee ugu horreeya ee Indiana wuxuu ku siinayaa qiimo weyn akoonkiisa kaydka ganacsiga ee internetka, the Xisaabta Kaydka Suuqa Lacagta.
Waxaad ka dalban kartaa Koontada Kaydka Suuqa Lacagta ee Bangiga Kowaad Internetka oo aad si dhaqso leh u heli karto qalabka buuxa ee aaladaha bangiyada ee tooska ah ee internetka iyo guurguura. Iyada oo leh APY -da ugu sareysa liiskayaga, koontadan kaydka ayaa noqon karta ikhtiyaar qiimo u leh ganacsiyada kala duwan ee kala duwan.
Hawlaha ugu horreeya ee koontada kaydka suuqa lacagta ee bangiga internetka
Dhigashada ugu yar ee USD 100
USD 5 ujrada dayactirka bil kasta haddii deynta maalin walba ay ka yar tahay $ 4,000
Lix lacag -la -noqosho ama wareejin bilaash ah bishii; $ 5 macaamil dheeri ah
Kaarka debit -ka ee ATM ee iskaashatooyinka keli ah
Xulashada ugu dambaysa ee ku jirta liiskayaga xisaabaadka kaydka wax -soo -saarka ee ugu fiican waxay ka timaaddaa Live Oak Bank. Bangiga Live Oak wuxuu u bixinayaa sidii bangi ujeedo ganacsi oo yar oo bixiya koontadiisa kaydka oo leh APY 12 jeer ka sarreeya celceliska qaranka.
Waxaad sidoo kale ka furi kartaa koontadaada Live Oak gebi ahaanba onlayn. Kani waa ikhtiyaar weyn haddii aad rabto inaad gasho koontadaada kaydka isla markiiba.
Astaamaha Koontada Kaydka Ganacsiga ee Live Oak Bank
Majiro deebaaji ugu yar
Ma jiro khidmad dayactir bille ah
Bangiyada khadka tooska ah
Lix macaamil oo lacag la’aan ah; $ 10 macaamil dheeri ah
USD 15 khidmada wareejinta ee soo socota
$ 19 khidmadda wareejinta dibadda ah
Ally wuxuu ahaa xiddig awood u leh kaydinta soo noqoshada sare sanado badan wuxuuna si joogto ah u helaa abaalmarino heer sare ah oo loogu talagalay bangiyada internetka. Waa mid si gaar ah loogu jecel yahay millennials -ka xayeysiiya helitaankiisa iyo fududeynta adeegsiga.
Waxaad ku shubi kartaa jeegag adiga oo adeegsanaya app -ka moobaylka isla markaana waxaad ku furi kartaa koontooyin badan daqiiqado gudahood.
Ally wuxuu fududeeyaa kaydinta hadafyada gaarka ah. Koonto kasta u yeel naanays, tusaale ahaan B. “Sanduuqa Gurmadka” ama “Koontada Socdaalka” si ay ula socdaan horumarkaaga oo aad u dhiirrigeliso.
Waxaad dooran kartaa inaad lahaato koonto gooni ah meel kasta oo aad tagto, laakiin Ally waxay leedahay astaamo baaldi oo kuu oggolaanaya inaad ku keydiso meelo badan hal akoon.
Ma jiro ujrooyin dayactir bille ah ama shuruudaha deynta ee ugu yar
Lacagtaadu waxay kasbataa lacag iyada oo dulsaar la isku daray maalin kasta
Xadka 6 bixitaan halkii wareeg ee bayaan
Marcus wuxuu hadda bixiyaa mid ka mid ah canshuuraha ugu tartanka badan warshadaha. Ma jirto lacag deebaaji ah ama dheelitirka xisaabta ugu yar ayaa loo baahan yahay, mana jiraan khidmado dayactir bille ah. Barnaamijka moobiilka ee Marcus ayaa isna helay dib u eegisyo togan.
Dhigashada jeegga gacanta iyo helitaanka taageerada macmiilka. In kasta oo adeegsadayaasha barnaamijka Marcus Mobile ay siiyaan dib -u -eegisyo wanaagsan, haddana barnaamijku kuu oggolaan maayo inaad si dijital ah u dhigato jeegag. Marcus wuxuu kaloo leeyahay saacadaha adeegga macmiilka oo aad u xaddidan marka loo eego tartamayaal badan, labadaba taleefanka iyo internetka.
Lacag la'aan iyo deebaaji ugu yaraan
Xidhiidh xisaabaadka bangiyada kale ee wareejinta soo galaya iyo kuwa baxaya
Xarunta xiriirka ee fadhigeedu yahay Mareykanka wuxuu furan yahay 7 maalmood usbuucii
FDIC waa caymis
Kahor intaadan kaydintaada oo dhan hal meel dhigin, ka fiirso koontada keydinta wax -soo -saarka ee sareysa ayaa kuu qaban karta. Markay timaado kordhinta lacagtaada waqti ka dib, xulashada koonto leh dhalid sare waa dabayl.
Ka dib oo dhan, waxaad si fiican u taqaanaa meheraddaada waana qofka kaliya ee go'aamin kara koontada kaydka ee ku habboon baahiyahaaga.
Si kastaba ha noqotee, mid kasta oo ka mid ah akoonnada kaydinta shirkadaha ee wax-soo-saarka badan ayaa suuragal ah inay si wanaagsan ugu adeegaan meheraddaada-mid kastaa wuxuu bixiyaa APY muhiim ah iyo marin-u-helitaan, iyo sidoo kale faa'iidooyinka koontada kale.
Ikhtiyaaradan, waxaad haysataa dhammaan aqoonta aad u baahan tahay si aad si hufan u hesho koontada kaydka oo aad u gaarto go'aanka saxda ah ganacsigaaga.
Iyada oo aan loo eegin doorashadaada, furitaanka koontada keydka waa tallaabo xiiso leh - tallaabo macnaheedu yahay in meheraddaadu ay sii koreyso oo aad diyaar u tahay inaad maal -gashato mustaqbalkaaga.
Lacag Bixin si aad ugu guurto Dal kale | 15 Meelaha ugu Fiican 2022
Nolol cusub oo waddan kale laga bilaabo waxay noqon kartaa waayo-aragnimo adag. Qaarkood, way u fududahay…